Taf'Ita | Aleo very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola - Taf'Ita
Aleo very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola
Fanendahana, fanolanana, fakana an-keriny sy famakian-trano ary famonoana olona. Izany rehetra izany ny fitrangan’ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Raha ny eto Antananarivo manokana, tsy dia ahitana toerana milamina intsony. Tsy mandry fahalemana intsony na aiza na aiza aleha.
Tsy hita taratra intsony ny fihavanana malagasy, izay nampalaza antsika taloha. Tamin’ny 25 febroary 2022, atoandro, lasa teo, teny Ankandindravola Ivato, ramatoa iray sy ny zanany no voaendaka. Nijery fotsiny ny olona, ary misy nitsoaka mihitsy aza, Tsy misy nanampy ireo olona voaendaka. Fiara tsy mataho-dalana iray aza nandalo fotsiny, nefa hitany izao ny fanendahan’ny olona roa an’izy mianaka.
Voasazin’ny lalàna anefa ny tsy famonjena olona iharan’ny herisetra. Nohon’ny fahatahorana ve ny tsy hanampiana olona sa inona ? Tsy hita loatra ny fandraisana andraikitra ataon’ny mpitandro filamanana. Manosika ny olona hanao fitsaram-bahoaka anefa izany.
Matanjaka toy ireny ihany ve ka maninona no tsy mitady asa ? Sa ve nohon’ny hakamoana sy ny fitiavana kely ? Raha milaza fa tsy manana na koa tsy manana diplaoma anie, azo ampiasaina amin’ny asa samihafa ireny herim-batana ireny e! Toy ny fitaterana entana, mpiambina amina orinasa…
Mahantra loatra ve ka tsy mifidy fotoana anaovana ny asa ratsiny na maraina na atoandro na hariva na alina ? sa ve mamon’ny zava-mahadomelina loatra ka tsy misy tahotra intsony ? Efa maro manko ny tanora miankin-doha tanteraka amin’ireny. Tanora avokoa ny ankamaroany amin’ireo olon-dratsy.
Mailo daholo ny rehetra amin’izao, tsy mivingitra poketra sy zavatra sarobidy intsony ny olona rehefa miantsena. Raha voatery mitondra aza, tsy maintsy fikirina be. Anao ahoana re ny fiainantsika aoriana ao raha mbola mitohy izao ?
CAREME 2022 : Le jeûne des mauvaises habitudes